Ciidamada Booliska Somaliland oo qabtay Nin kale oo qaba Cudurka Juudaanka | Somaliland.Org
Ciidamada Booliska Somaliland oo qabtay Nin kale oo qaba Cudurka Juudaanka
October 28, 2009	Hargeysa (Somaliland.Org)- Ciidamada Booliska Somaliland ayaa shalay gacanta ku dhigay Nin la sheegay in uu qabo Cudurka Juudaanka, maalin ka dib markii dalka laga masaafuriyay nin kale oo isna Cudurkan qabay. Waxaanay ka war-bixiyeen sida loo qabtay iyo tallaabada laga qaadayo.
Ciidamada Booliska ayaa shalay Ninkan ka qabtay agagaarka Saldhigga dhexe ee Magaalada Hargeysa, isla markaana waxa lagu xidhay Saldhigga dhexe. Taliyaha Saldhigga dhexe ee Magaalada Hargeysa Maxamed Cismaan Xirsi (Maxamed-Case) oo wax laga waydiiyay dhacdadan iyo sida ninkan loo qabtay, mar uu kula kulmay Xafiiskiisa Saldhigga, ayaa wuxuu ku jawaabay oo uu yidhi, “Anagu maanu ogayn nin Cudurka Juudaanka qaba oo Soonahan jooga, waxaana agagaarkeenan joogay Ninkii shalay (dorraad) la qabtay ee la masaafuriyay. Anagu waxaanu aragnay labadaa Nin, balse cabsigan kale ee dadku sheegayaan, Inantaa yar ee Miyiga laga keenay ee Cusbatalka taalla mooyaane, maan arag cid kale oo la cunay ama wax kale lagu sameeyay…cabsidan hadda ina soo gashay, waxa la sheegayay nin Bahal ku cunay Xaafadda Daami, anigu ma arag. Balse, Ninkan aanu hadda hayno waa la masaafurinayaa oo Kiiskiisa gacanta ayaanu ku haynaa.”
Mar la waydiiyay Taliyaha halkani dadkani ka yimaaddeen, ayaa wuxuu ku jawaabay oo uu yidhi, “Dadkan Itoobiya ayay ka wada yimaaddeen, waxaana dalka kaga soo horreeya ehelkooda. Waxaana soo sheegaya dadka oo noo sheegay, waxaana lagu baraarugay Ninkii shalay (dorraad) lagu qabtay Hargeysa.”
Taliyaha waxa la waydiiiyay sida loo xakamayn karo dadkan, maadaama la ogyahay inay Itoobiya ka imanayaan iyo inay suurtogal tahay in tiro intan ka badan oo Cudurkan qabaa ay dalka joogaan. “Waa la xakamayn karaa oo waa layska celin karaa, kii hore waa la masaafuriyay, kanna waanu gudbinaynaa. Ma ogin tiro kale oo joogta, waayo waa la soo sheegi lahaa. Balse, waa dad ilaa shalay (dorraad) ina soo galay oo Itoobiya ka yimi. Waxaana lagu xakamayn karaa Xuduud baynu leenahay, Gaadiidka soo qaadana waa la xidhayaa haddaanu ku qabano..Shalayba (dorraad) mar buu naga cararay Ninkii Itoobiyaanka ahaa ee Juudaanka qabay, haddana waxa nala qabtay Shacbi badan oo muwaadiniin ah.” ayuu yidhi Taliyaha Saldhigga dhexe ee Hargeysa.
Sidoo kale, waxa taliyaha la waydiiyay Ey sumaysan oo Dameer uu qaniinay uu waxyeelleeyay qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan Hargeysa iyo sababta dhinacooda ay wax uga qaban waayeen. “Eyda iyo Xayawaanka waxa qaabilsanaan jirtay Hay’ad, laakiin anagu Dameerkan iyo Dameer horeba waanu aragnay. Balse, amni ahaan haddaanu aragnay wax sumaysan waanu qabanaynaa.” Ayuu ku jawaabay Maxamed-Case. Waxaanu sheegay in dhinacooda ay hawl-gallo ay qaadeen wax kaga qabteen Tuugada.
Aakhirkiina wuxuu baaq u jeediyay Taliyuhu shacabka ku nool Hargeysa iyo guud ahaan Somaliland. “Dadweynaha waxaan ugu baaqayaa inay nabaddooda ilaaliyaan oo ay is-ilaaliyaan, wax aan jirin in aan la sii buunbuunin ee wixii la arko Booliska lala soo socodsiiyo.” Ayuu yidhi Maxamed-Case.